Quintus tinye ọkụ dị nso na ala, na-efe efe n'elu, loop, vario
Home dị iche iche Onyinye nka na ụzụ Quintus 8,85 m - thermals crank - banye na temume dị nso na ala, fefee, looping, vario
Video gara aga Quintus na ASH 25 guzobere
Video nke ozo 360 Celsius FPV UNCUT nkeji 53 nke ntụgharị obi ụtọ Quintus M nwere nku 8,90, nwee obi ụtọ.
8. Mee 2020 - LUD: 5. October 2020
[Ọnụ: 16 Nkezi: 5]
Na vidiyo 360 Celsius a, agbanyụrụ injin ahụ na Quintus (8,90 m wingpan) ozugbo ọpụpụchara ma a na-achọ thermals ndị dị nso na ala ahụ, etiti ya na cranked.
Maka oge izizi, agbanyere ụda vario na vidiyo 360 Celsius a.
Site na vidiyo vidiyo a, o dokwara anya n'ụzọ otu mmadụ si abanye na-adịghị ike n'akụkụ ala, nke a hiwere isi mgbe achọtara obere ogige mmelite.
Mgbe ahụ, a na-agbanwe elu elu ka ọ gaa ọsọ ọsọ ka ọ wee banyeghachi ọkụ na-adịghị ike n'akụkụ ala. Daalụ ịdị mma ị nwere engine nke ihe eji arụ ọrụ dị ka nchekwa ma ọ bụrụ na i mehiere ma nke ahụ nwere ike ịme ngwa ngwa.
Ezubere vidio a iji gbaa gị ume ka ị ghara ịbelata afụ ọnụ gị mgbe niile.
Ozugbo 150-250 m ruru ọzọ, belata ogo ma bido.
Choo okpomoku, tinye ya ma gbanye onwe gị ọzọ. Omume a dị ịtụnanya na ụgbọ elu ga-ekwe omume dịka ị pụrụ ịhụ. Jisie, ọ na-azụ gị etiti ngwa ngwa na eriri mmiri na-adịghị ike.
Na ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ mbadamba ị nwere ike họrọ ihe kwesịrị ekwesị ịse clip site na-akpụ akpụ na kokpiiti ma ọ bụ na mkpịsị aka gị, nwalee ya ..
Na PC, ị nwekwara ike iji cursor ịhọrọ ezigbo echiche na kokpiiti.
Nwee anụrị ma nwee ọ videoụ vidiyo 360 Celsius a na oke mkpebi na 4k.
Nnukwu RC BD5J MICROJET 66% 1: 1,5 TURBINE JET GB-MODELS HANNES LUTZENBERGER [4K]
SOON UGO PARITECH RC SCALE GLIDER VIDIO AKW VIDEOKWỌ AKW VIDEOKWỌ "Ngosipụta"
Tags 360360 ° vidiyo4Kụgbọ elu ikuku na-achịkwaNwepu ngwa ngwaCranksMessenModelingModel na-efe efeFlightgbọ elu ụgbọ eluụgbọ elu igweOnyeka OnwenuOBIARARCụgbọ elu rcrc nlereanyaSchambeckGba n’elupụtara ìhèreviewsKwes videoKwes na-efe efeIgwe ọkụvarioiheetiti